Hisy e-varotra ve eto Afrika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2007 15:32 GMT
Nahaliana ny adi-hevitra momba ny ho avin’ny e-varotra eto Afrika tamin’iny herinandro lasa iny.
Natomboky Oluniyi David Ajao tamin’ny lazan’ny e-gold (vola an-tsoratra manana sandam-bolamena) ao Nigéria ny resaka. Mety hanjohy io fahombiazana io koa ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny karatra hafa eto Afrika :Nahoana no tena tiam-bahoaka ny e-gold ao Nigéria?
Mihamisongadina ny isan’ny Nizeriana miditra amin’ny ty sy nday ifanaovan’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny World Wide Web. Araka an’Internet World Stats dia mahatratra 5.000.000 ny isan’ny mpanovo ny siniben-tserasera ao Nizeria. Ny 03.57% monja amin’ny mponina mahatratra 140.000.000 izany (fanisana ofisialy taona 2007 ).
Tsy maintsy mampiasa ny fandoavam-bola an-tserasera ireo mpanovo siniben-tserasera ireo hahamora ny e-varotra ifanaovana amin’ny hafa. Ankoatra ny mividy sy mivarotra an-tserasera, dia maro koa ny mpametra-bola any amin’ny fifanakalozana sy ny tsenam-bola any ivelany, forex ohatra, any amin’ny fametrahana sy fampindramam-bola ahazoana zanabola midangana (HYIPs) ary amin’ny fikirakirana ny haivarotra amin’ny ambaratongan-dingana samihafa (MLM).
Avoitran’i Erik Hersman mibilaogy ao amin’ny thought leader kosa ny heveriny ho
olana manakana ny fandrosoan’ny e-varotra eto Afrika – Afrika atsimo indrindra indrindra : ny olana amin’ny fandoavam-bola an-tserasera sy ny e-varotra eto Afrika :
Ny fahabangan’ny fomba fandoavam-bola an-tserasera matotra eto Afrika no mampifintina ny e-varotra Afrikana, ary tsy tafala amin’izany i Afrika Atsimo. Ny tsy fahazoana manaraka ny fomba fandoavam-bola ifanaovan’izao tontolo izao rehefa mividy zavatra na manao fifanarahan’asa no midika fa betsaka ny fandraharahana azo atao tsy vonona ho an’ny mpivarotra eto Afrika. Ny ambiny kely isafidianana ho amin’ny e-varotra eto Afrika kosa dia mbola mila fahazaram-pandraharahana, fandanian-karena ary famolahana kely.
Nanome tolo-kevitra vitsivitsy i Erik Hersman any amin’ny faran’ny lahatsorany:
Itovizana ny hevitra fa ny famahana olana ho an’i Afrika dia mahaleo tena manoloana ny banky sy ny mpanera hafa. Noho izany, efa manomboka mipoitra ireo vahaolana azo heverina, saingy mbola tsy nisy nahita kosa ny valiny tena mahafa-po hahamatotra ny e-varotra ho an’i Afrika. Mazava loatra fa raha ahafahana manaporofo ny fisiantsika sy ny orinasantsika eto Afrika ny fampiasana ny PayPal dia mety handraoka nyankamaroan’ny fifanaraham-barotra an-tserasera anatin’ny fotoana fohy monja.
Fa nahazo setriny avy amin’i Oluniyi David Ajao avy hatrany izy izay milaza fa azo heverina ihany eto Afrika ny mifampiraharaha amin’ny alalan’ny e-varotra amin’izao fotoana izao : Azo atao ve ny manangana tambazotra iraisan’ny Afrikana amin’ny e-varotra? :
Ny ambiny kely isafidianana ho amin’ny e-varotra eto Afrika kosa dia mbola mila fahazaram-pandraharahana, fandanian-karena ary famolahana kely. Marina ihany izany fa amin’ny lafiny sasany. Ny ao an-tsain’i Erik Hersman amin’izany resaka izany dia ny fomba fandoavam-bola mahazatra amin’ny alalan’ny karatra famantarana ny vola ampelantanana na ny trosa. Fa na dia amin’ny alalan’ny mastercard sy Visa fotsiny ihany anie dia efa ahafahan’ny mpanao ty sy nday Afrikana miditra an-tsehatra tanteraka amin’ny sehatry ny e-varotra e !
Notanisainy amin’izay ary hazavainy ireo fomba fandoavam-bola an-tserasera ahafahana mandray anjara amin’ny e-varotra na aiza na aiza eto Afrika. Toy izao no namehazany azy :
Mino aho noho ireo nosoratako ireo fa afaka miantsena tsara amin’ny alalan’ny e-varotra ny mponina eto Afrika na dia izao ankehitriny izao aza ! Azoko tsara ny eritreritrao Atoa Erik Hersman saingy sarotra tanterahina ny fananana tambazotrana e-varotra iraisan’ny Afrikana raha tsy efa nanana fivondronana ekonomika matotra ny firenena afrikana. Fivondronana manana fitsipi-pitantanam-bola iraisana sy politika ekonomika iraisana. Ny Vondrona Eoropeana no ohatra mahazatra amin’izany saingy tsy izany aloha no misy izao. Na ny vondrom-paritra toy ny COMESA aza dia tsy manana izay firaisana ekonomika izay na dia misy aza ny fiezahana ho amin’izany. Mahafantatra ohatra roa azo alain-tahaka amin’ilay e-varotra lazainao aho izay misy any Eoropa no mety tsara ho an’ny Eoropeana : Moneybookers sy ChronoPay. Azo tanterahina ve ny tambazotrana e-varotra afrikana ? Eny, azo tanterahina. Saingy tsy maintsy mikambana aloha ny firenena afrikana hahatontosa izany.Izay no ihavian’ny zavatra hafa. Tapitra.
Niditra tanaty resaka iGrandiose Parlor nanontany hoe : Azo tanterahina eto Afrika ve ny e-varotra ankinina amin’ny fampiasana finday ? :
Maro ny adi-hevitra panafrikana mitovitovy amin’izay ifanaovan’i Erik sy David any amin’ny haino aman-jery sy any amin’ny blaogy, saingy hitako fa raha jerena ny lafiny sosialy sy ekonomika ary politika misy eto amin’ny kontinanta –ankoatra ny fananany manam-pahaizana, dia maro amin’ireny reska ireny no maty an-karanany : maro dia maro ny singa mibahana ka manasarotra loatra ny fanatontosana hevitra panafrikana, raha tsy hoe tsy azo atao mihitsy aza izany. Aoka isika tsy hamita-tena, hevitra lehibe sy manintona ny panafrikanisma (fitambaran’ny firenena afrikana hiray volo)- fa iza moa tsy te-hifandraharaha amin’ny kaontinanta lehibe faharoa sy faharoa be mponina indrindra eto an-tany ?
Na dia eto Nizeria firenena mahazatra ahy indrindra, sy ny manodidina azy akaiky aza, zana-paritry Afrika andrefana dia mbola sarotra ny manangana fomba fandoavam-bola « mahaleo tena miohatra amin’ny banky sy mpanera hafa » saingy mety ho avy izany sady hahomby.
Nanontany avy eo i Grandiose Parlor :
Ny mahazatra ny ankamaroan’ny Nizeriana hitako – eny fa na dia ireo tsy mpandoa hetra aza – dia ny fividianana fahana ho amin’ny finday. Ara-dalàna amin’ny takalo ara-barotra an-tserasera sy ny e-varotra ve ny halavan’ora azo iantsoana amin’ireny fahana finday ireny ?
Anatin’ny tsenam-barotry Afrika an-tserasera ve ianao ? Raha eny, Inona ny fanamby atrehinao ? Efa nampiasa ny soso-kevitry ny mpibilaogy ve ianao ? andeha ary hidinika amin’ny fametrahanao ny hevitrao.
tsy ratsy ilay e-commerce adika hoe e-varotra. Nizeria sa Nigeria amin’ny teny malagasy?
03 Oktobra 2007, 16:51
Noraisiko amin’ny fomb fanononana malagasy mihitsy ilay izy ka! fa hay misy teny tsy voatandrina tokoa ao anaty lahatsoratra ao!
04 Oktobra 2007, 05:31
04 Oktobra 2007, 11:46